Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka oo Ganacsatada iyo Wasiir Maareeye kala shiray dhibaatooyinka heysta Ganacsatada – Kalfadhi
Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka oo Ganacsatada iyo Wasiir Maareeye kala shiray dhibaatooyinka heysta Ganacsatada
February 12, 2019 February 12, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Sacdiya Careys Ciise oo katirsan Guddiga Ganacsiga iyo Warshadaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb gashay Shir ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Ganacsiga, kaas oo looga hadlayay dhibaatooyinka heesta Ganacsatada Soomaaliyeed.
Kulankaan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa diiradda lagu saaray dhibaatooyinka heesta Ganacsiga iyo Ganacsatada Soomaaliyeed, si gaar ah waxaa looga hadlay ammaanka hantida Ganacsatada oo maalmihii la soo dhaafay la kulmayay dhibaatooyin ka dhan ah Ganacsigooda sida ay sheegeyn qaar katirsan Ganacsatada.
Sidoo kale waxaa ka qayb-galay Xildhibaano kale oo katirsan Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka, Ganacsatada ayaa sheegay in ay qatar walba u bareeraan si loo sii wado Ganacsiga Soomaaliya. Wasiir Maareeyee ayaa Ganacsatada kulanka ka soo qayb-gashay kala hadlay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka Soomaaliya.
“Waxaan magacaawnay Guddiga Tayeenta iyo Suuq-gaynta wax soo saarka Soomaaliya, macquul maahan in dalka loo iib keeno wax soo saarka dalal kale, kuwayniina ay halkaan ku halaabaan” ayuu Warbaahinta u sheegay in Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya.
Xildhibaan Sacdiyo Careys Ciise oo xubin ka ah guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadashay culayska haysta Ganacsatada Soomaaliya waxa ayna sheegtay in looga bixi karo dadaal iyo isku duubnaan.
“Isku duubni iyo dadaal ayaa looga bixi karaa dhibka jira, waan ka war-heynaa culeeska idin saaran waxaan filayaa in dhowaan ay dowladda idinka dulqaadi doonto” ayey tiri Xildhibaan Sacdiyo Careys oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka 3aad ee Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo markii 3aad baaqday
Golaha wasiirada cusub ee Puntland oo maanta la dhaariyay iyo madaxweynaha la dardaarmay